Solombavam-bahoaka TIM: Manameloka ny fifamonoan’ny samy Malagasy
vendredi, 18 octobre 2019 17:33
Nanao fanambarana ireo Solombavam-bahoaka voafidy avy amin’ny antoko Tiako I Madagasikara io tolakandro io, manameloka ny fifamonoan’ny samy Malagasy tamin’ny fifanjevoana teny Ambohitrimanjaka ny harivan’ny alakamisy 17 oktobra 2019.
Nitondra teny i Me Hanitra Razafimanantsoa, Solombavam-bahoaka voafidy tao Antananarivo Voalohany, izay nanipika fa ho aiza ny firenena raha tetikasa goavana no atomboka amin’ny fandatsahan-dra.
Rehefa tsy mety dia avereno ny fakan-kevitra, misy dingana tokony arahina, hoy hatrany ny depiote Hanitra Razafimanantsoa. Samy manana tombontsoa na ny Fanjakana te hanao ny tetikasa na ny tompon’ny tany mivelona amin’ny toerana hanaovana tetikasa.
Na ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, Alexandre Georget, tonga tao amin’ny Antenimieram-pirenena aza, hoy i Me Hanitra Razafimanantsoa niala tsiny noho ny tsy fahaizan’ny governemanta nitantana an’ity tetikasa ity, koa andao hiverina ambony latabatra, marimaritra iraisana no tadiavina.
Nanamafy ireto solombavam-bahoaka Tiako i Madagasikara ireto fa « mpanohitra izahay, saingy tsy mpanohitra be fahatany ka raiso ny tsikera ».
Manameloka ny famoaham-baovao tsy marina, ny fanaparitahana sary mampihoron-koditra an-gazety sy ny fanasoketana ny solombavam-bahoaka TIM ihany koa izy ireo. Vahoaka Malagasy ary misy olona nifidy an’i Andry Rajoelina eny Ambohitrimanjaka, ka aleo hisy ny fanajana, hoy hatrany izy ireo.